Yini engayenza i-backlink sites creating value kuwebhusayithi yakho?
Namuhla, ukuhlelwa kwe-algorithms yokusesha injini kuyinkimbinkimbi futhi kuhlakaniphile. I-Google inikeza amazinga amasha anjenge- "DA" (Isiphathimandla Sesizinda) kanye ne- "PA" (Ikhasi LesiGunya) sokufaka esikhundleni se-PageRank esasiyigugu ngaphambili. Lezi zigaba ezintsha zisetshenziselwa kakhulu ukucacisa izinga legunya lewebhusayithi.
Ukwakha iphrofayli yokwakha isixhumanisi esinamandla nephuthumayo iphupho layo yonke umnikazi webhusayithi kanye ne-blogger. Ama-backlink aphezulu wegunya angaphathisa kakhulu inani lakho kusayithi lakho. Okokuqala, bangathuthukisa isikhundla sakho sewebhusayithi ku-SERP. Okwesibili, zithwala izimoto eziqondiswe futhi ziguqulwa kwisayithi lakho futhi okwesithathu zizokwakha imali yebhizinisi lakho.
Akuyona umsebenzi olula ukuthola ama-backlink kusuka kumasayithi aphezulu e-DA. Udinga ukuba nolwazi olukhethekile namakhono ukuze wakhe umkhankaso wokwakha umxhumanisi wokuwina. Kodwa-ke, akufanele udikibale ngisho noma uzizwa ungenalutho kulolu chungechunge. Kulesi sihloko, uzothola uhlu lamawebhusayithi e-DA aphezulu abamukela ukusayina kubasebenzisi abasha futhi abanike ithuba lokudala iphrofayli entsha. Ngaphezu kwalokho, ngizokwabelana nawe ngamanye amathiphu ukuthi ungakha kanjani iphrofayili ye-backlink favorable.
Amasayithi okudalwa ngemuva kwe-backlink
Uma usebenzisa umkhiqizo futhi unelisekile ngekhwalithi yayo, cabanga ukuthumela ubufakazi. Uma udala ubufakazi, qiniseka ukuthi uqaphele ukuthi umnikezeli wemikhiqizo angayifaka kukhasi lakhe eliyisiqalo noma ikhasi lobufakazi. Njengomthetho, abahlinzeki bafaka isixhumanisi sakho eduze kobufakazi bokubonisa ukuthi ungumuntu wangempela. Ngakho-ke, ungathola ikhwalithi kanye ne-backlink yemvelo kusukela ebufakazini.
Funa amathuba okuxhumanisa ngokubuyekezwa kwe-blogger
Uma unikeza abasebenzisi ngomkhiqizo wesofthiwe, ulwazi lwekhwalithi noma eminye imikhiqizo ebalulekile, ukuyibuyisela ibe yi-backlink efanele futhi ephezulu. Ungabathola ngokuzinikela kubakhulogi noma ucele amakhasimende akho ukuthi ashiye impendulo.
Landela le miyalo ukuze uthole ama-backlink aphezulu kusayithi lakho ngokusebenzisa izibuyekezo ze-blogger:
Thola ibhulogi ku-niche yakho esevele ithumele into ehlobene nomkhakha wakho. Faka ebhokisini lokusesha le-Google umbuzo ngamagama akho angukhiye ahlosiwe. Ngenxa yalokho, injini yokusesha izokunika uhlu lwewebhusayithi nama-blogs abhekisela embonini yakho.
Hlunga noma yikuphi amasayithi amakhulu negunya namasayithi amasha. Ekugcineni, uzoshiywa ngolwazi oluqinile lwabalandeli abangase banesithakazelo ekunikezeni kwakho.
Finyelela kubanikazi bewebhu nababhulogi ngokusebenzisa i-imeyili noma ucingo lwefoni. Yiba nomusa futhi uhloniphe kubo futhi uqaphele kakhulu ngolimi olusebenzisayo. Kungaba ukuthi uzocelwa ngokukhokha noma yiziphi ezinye izimo ezizuzisayo.
Ukuxhumanisa isixhumanisi kuyindlela elula yokuthola ijusi elinamandla lokuxhumanisa isayithi lakho. Udinga ukuthola ukukhuluma mayelana newebhusayithi yakho lapho isixhumanisi sakho sesayithi singaboniswa khona. Konke okudingayo ukuxhumana nomlobi walokhu okukhulunywe ngakho bese umcela ukuthi angene isixhumanisi sakho. Ama-backlink anjalo asebenza ngamavoti kumkhiqizo wakho futhi aphakamise igunya lakho lewebhu emehlweni e-Google Source .